antivirus အခမဲ့ Lite ကို - 2017 | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » antivirus အခမဲ့ Lite ကို - 2017
antivirus အခမဲ့ Lite ကို - 2017 APK ကို
မက်စ်လုံခြုံရေးများက App ကိုသင်ရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံး antivirus ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုရောက်စေဖို့ဂုဏ်ယူပါ! အလွန်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ထောက်လှမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းကျွမ်းကျင်သူဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက် Download!သန်း 15 ကျော်ကအသိမှတ်ပြု, ဒါကသင့်ရဲ့ device များအတွက်အဆုံးစွန်ဒိုင်းလွှားနေသည်ပါ! antivirus အခမဲ့ Lite ကို - 2017 သူတို့ကိုဖော်ထုတ်မယ်အားဖြင့်သင့်ရဲ့ Android device များကူးစက်ကြောင်းဗိုင်းရပ်စ်နှင့် malware များ၏ပျံ့နှံ့ကာကွယ်ပေးသည် သူတို့ပြန့်နှံ့မတိုင်မီ!
စီးပွားဖြစ်အစစ်အမှန်အချိန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ကိုအကြွင်းမဲ့အခြားလုံခြုံရေး app များကို beats သောအခမဲ့ antivirus ကို download လုပ်ရယူပါ!
အဘယ်ကြောင့် Antivirus ကိုအခမဲ့ Lite ကိုပါဘူး - 2017 ကြွင်းသောအရာတို့တွင်အထွက်မတ်တပ်ရပ်?
ရုံဗိုင်းရပ်စ်စကင်ထက်ပို, Antivirus ကိုအခမဲ့ Lite ကို - - ★ကတူအခြားဘာမျှမရှိတယ် 2017 ဗိုင်းရပ်စ်ဘို့နှစ်ခုလုံး apps များနှင့်ဖိုင်များစစ်ဆေးပြီးကြောင်းတည်းသောစီးပွားဖြစ်အစစ်အမှန်အချိန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အင်ဂျင်ကိုရှိပါတယ်, junk (cache ကို) ဖိုင်တွေနဲ့ malware များ သူတို့ကိုသင် install အဖြစ်!
Antivirus ကိုအခမဲ့ Lite ကို - - ★ဒါဟာအထိရောက်ဆုံး antivirus ကိုမိုဘိုင်း App ကိုဖွင့် 2017 မပါဘဲချိုးနှင့်ဖိုင်များစစ်ဆေးပြီးသူတို့သင့်ရဲ့ device ရဲ့သိုလှောင်မှုအပေါ် created သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲသွားတယ်နေကြသည်နည်းတူ compressed zip ဖိုင်များအတွင်းပိုင်းကြည့်သောသာလုံခြုံရေးအပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
★ရိုးရှင်းသောနှင့်ကြော့ဒီဇိုင်း - သိပ်ရှုပ်ထွေးသည်အခြား antivirus ကို apps များရှိပါသလား မက်စ်လုံခြုံရေး Antivirus ကိုအခမဲ့ Lite ကိုသေချာစေရန်ရှေ့ဆက်သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအားထုတ်မှုထား - 2017 တစ်စူပါရိုးရှင်းသော user interface ကိုအတူအစွမ်းထက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ကယ်တင်တတ်၏။
ဝေးနေဖြင့်★အကောင်းဆုံးလုံခြုံရေး app တစ်ခုပါ - သင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည့် apps များနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ antivirus အခမဲ့ Lite ကို - 2017 ကို malware, adware, spyware, မွငျရသောအားနည်းချက်များနှင့် Trojan များအနေဖြင့်သင့်ရဲ့ device အခမဲ့သေချာစေသည်!
antivirus အခမဲ့ Lite ကို - 2017 အင်္ဂါရပ်များ
လုံခြုံရေးလယ်ပြင်၌ 20 နှစ်ကျော်နှင့်အတူလုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အားဖြင့် Android အတွက် built! အလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့ applications များလုံခြုံရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ #1 အခမဲ့ antivirus ကိုအတူအာမခံပါသည်။
သင့်ရဲ့ applications များလုံခြုံရေးသေချာအစစ်အမှန်အချိန်အတွက် apps များ, ဖိုင်တွေနဲ့ zip ဖိုင်များ installed ရီးရဲလ်အချိန်မိုဘိုင်းကာကွယ်မှု Scan ဖတ်။
မှတ်ဉာဏ်ကဒ် Scan ကို►
သင့်ရဲ့ device များအားလုံးကိုဖျက်ဆီးစေနိုင်သောဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် malware အဘို့သင့် SD ကဒ်နှင့် internal memory ပေါ်ဖိုင်တွေနဲ့ zip ဖိုင်များစိစစ်သည်။
တင့်တယ်, ရိုးရှင်းသော interface ကို►
App ကိုသင့်ရဲ့ device ကိုအင်အားစိုက်ထုတ်ကာကွယ်စေသည်တစ်ခုကြော့, အကျွမ်းတဝင်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ interface ကိုသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသောပါရှိပါတယ်။
► Zip File ကိုစကင်
နက်ရှိုင်းစွာအတွင်း embedded ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုရှာဖွေရန်သင့်ကိရိယာပေါ်တွင်ဇစ်ဖိုင်ကိုဆိတ်ကွယ်ရာအားလပ်ချိန်။
စိတ်ကြိုက်အသံဖြင့်အကြောင်းကြားစာများကိုခြိမ်းခြောက်မှုများသင့်ရဲ့ကာကွယ်မှု 24 နာရီတစ်ရက်,7ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်သေချာရှာတွေ့သည့်အခါသင်ချက်ချင်းသိစေ !.
ကဲ့သို့သောဆက်ပြောသည် features တွေအဘို့အ Antivirus ကိုအခမဲ့ 2017 အပြည့်အဝဗားရှင်းကိုရယူပါ Deep Scan ကို နှင့် အော်တို Scan ကို.
Pro ကို Go
- 2017 အသစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်း!
- မြန်, ပိုကောင်းတဲ့စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အင်ဂျင်!
- ဗားရှင်း 3.0!
antivirus အခမဲ့ Lite ကို - 2017
3.84 ကို MB
ဒီဇင်ဘာ 1, 2016
စုစုပေါင်း Antivirus ကို ...